Tractor "Belarus" MTZ-1523: nkọwa, emeputa, nkọwa, ntụziaka, foto - Ngwaọrụ ugbo - 2020
Ụdị ọrụ ugbo
Ngwongwo mmanu na oriri
N'ihu na azụ axle
Chassis, usoro hydraulic na GNS
A bit nke okike akụkọ ihe mere eme
Onye traktọ ụwa MTZ-1523 bụ nke Minsk Tractor Plant rụrụ. Nke a bụ onye nnọchianya nke ezinụlọ a ma ama nke "Belarus" (ya bụ, akara "Belarus-1200").
Ndị bu ụzọ nke ihe nlereanya a bụ igwe maara nke ọma MTZ-82 na MTZ-1221.
Ma, ha dị ala karịa "nke iri na ise" na ikike na traction. Nke a pụtakwara site na njirimara dị otú ahụ dị ka otu traction: a na-enye ihe nlereanya 1523 na mpaghara nke atọ, ebe e kenyere 1221 na nke abụọ, a na-enyekwa 82 nke a ọnụ ọgụgụ nke 1.4.
Kemgbe ọtụtụ afọ nke mmepụtara, MTZ-1523 ghọrọ ihe ndabere maka otu ezinụlọ nke traktị, enyere aka site n'ịdị na-agbanwe oge niile. Mgbanwe ndị ahụ bụ na ọ bụ engine. Ya mere, na ígwè ọrụ nwere ntinye 3, 4 na B.3 enwere motọ nwere ikike nke 150 lita. Na., Na ọnụ ọgụgụ 5 pụtara na n'ihu gị - ụgbọ ala nwere engine 153-horsepower. Obere oge ka e mesịrị, diesel dị na DEUTZ tinyere ụgbụ.
Na 2014-15 emepụta ihe atụ na ndepụta "6" ọzọ, nke nwere nnyefe hydromechanical (n'otu oge ahụ, a malitere itinye ọnụ a "ise").
Ọ dị mkpa! Na efere nke na-egosi ọnụọgụ nọmba nke traktọ ahụ na engine dị na azụ azụ nke cab, nso na wheel ụkwụ. N'okpuru ebe a, a na-etinye tebụl ọzọ na ọnụọgụ nke cab n'onwe ya.
Mgbanwe ndị ọhụrụ na ngwaọrụ ahụ dị ka afọ a. Ha na-emetụta ụdị ọkụ nke engine n'oge ọrụ. Ntughari ohuru weputara indices T1, T1.3 na T.3.
Uche ahụ wee nwee ọganihu nke ọma, mgbe ọtụtụ mgbanwe ndị dị ịrịba ama gasịrị, a malitere imepụta traktọ MTZ-2022 dị ike nke ụbụrụ nke 4 nke dị na ya.
A na-emepụta traktọ ụwa ka ọ rụọ ọrụ dị iche iche, ya bụ:
na-akọ ala ọ bụla;
na-aga n'ihu na-eme mkpọtụ;
preplant ala nkwadebe;
na-agha mkpụrụ ọka na-ejikọta ọnụ ọgụgụ;
owuwe ihe ubi nke ihe ubi akuku;
ebuli ma wepu ahịhịa na ahihia si n'ubi;
ọrụ njem (njem nke akụrụngwa ma ọ bụ trailers na ibu).
Maka ịkọ ala ndị ọhụrụ na-amaghị nwoke, onye na-adọkpụ trakler DT-54 ga-abụ nhọrọ kacha mma.
N'ịtụle na o nwere ike ịrụ ọrụ na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nkeji na ụlọ ọrụ pụrụ iche, ọ na-egosi na MT3-1523 nwere ike ịrụ ọrụ ọ bụla nke ọrụ ubi.
Ị ma? N'oge Agha Ukwu, a na-eji traktọ mgbe ụfọdụ na ụkọ tankị. Nkọwa ahụ bụ mmetụta mmetụta uche: ụdị psevdotanki gara n'ihu ịlụ ọgụ n'ọchịchịrị, na-enwu ọkụ ma na-agbanye.
A na-ejikarị ya eme ihe n'oké ọhịa, ụlọ ọrụ, na mgbidi.
Anyị na-atụgharị uche na nyochaa zuru ezu nke njirimara ekwentị nke ihe nlereanya a. K'anyị malite na "mmeghe," nke na-enye echiche n'ozuzu nke traktọ ahụ.
arọ akọrọ (n'arọ): 6000;
oke kachasị kwe ka nnukwu ibu na ibu (kg): 9000;
akụkụ (mm): 4710x2250x3000;
wheelbase (mm): 2760;
Ngwá ụkwụ ụkwụ n'ihu (mm): 1540-2115;
uzo uzo n'azụ (mm): 1520-2435;
mgbanaka ntụgharị kachasị elu (m): 5.5;
ụdọ: mgbanaka ụkwụ - 420 / 70R24, wiil azụ - 520 / 70R38;
nnweta ala (mm): 380;
wheel wheel: 4x4;
ọsọ ọsọ (km / h): arụ ọrụ - 14.9, njem - 36.3;
oke ọsọ na-agagharị (km / h): 2.7-17.1;
nrụgide ala (kPa): 150.
Mụtakwuo maka njirimara nkà, uru na nkwekọrịta nke traktị T-30, DT-20, T-150, MTZ-80, K-744, MTZ-892, MTZ 320, K-9000, T-25.
Ngwá ala nke MTZ-1523 bụ diesel D-260.1. Nke a bụ ihe ejiji 6-cylinder turbocharged engine. Ọ pụtara na data dị otú ahụ:
olu - 7,12 lita;
dayameta nke cylinder / piston stroke - 110/125 mm;
mkpakọ ruru -15.0;
ike - 148 lita. c.;
Ogologo kachasị - 622 N / m;
ngwa ngwa ngwa (rpm): ọnụ ọgụgụ - 2100, nke kacha nta - 800, nke kachasị - 2275, nke kachasị - 1400;
usoro jụrụ oyi - mmiri mmiri;
usoro nchịkọta - jikọtara ya;
arọ - 700 n'arọ.
Ụkpụrụ gburugburu ebe obibi: Nkeji 0/1. D-260.1 engine
Ọ dị mkpa! Na-agba ọsọ nke traktọ ọhụrụ na-ewe awa 30: a na-eji ọkara nke oge a eji ọrụ ọrụ uhie, a na-agafe ya na arụ ọrụ ubi site na iji GNS (usoro eletriki hydraulic). A na-ekpochapụ nzacha mmanụ nke nnyefe ahụ kwa awa 10.
Ejiri mmanụ ụgbọala ndị a na-enweta mmanụ nsị nke Czech ụlọ ọrụ Motorpal ma ọ bụ Pumps pump injection mmanụ ụgbọala Yazda. A na-ejikwa ọnọdụ ọkụ na-achịkwa ya na-akpaghị aka site na abụọ thermostats.
A pụrụ itinye traktị ndị ọzọ na traktị ndị a:
150 hp D-260.S1 nwere àgwà ndị yiri ya. N'eziokwu, e nwere ọdịiche dị iche iche n'ụdị eco-ọkọlọtọ (n'adịghị ka ụgbọ ala dị ala, nke a na-agbaso ụkpụrụ nke Stage II);
dịkwuo ike (153 hp.) na ìhè (650 n'arọ) D-260.S1B3. Nchekwa gburugburu ebe obibi - Nkeji IIIB;
D-260.1S4 na D-260.1S2 ya na ọnụọgụ nke 659 Nm;
Deutz TCD2012. Nke a bụkwa ihe nkedo 6-cylinder engine. Ma na obere (6 l) olu, ọ na-amalite ọrụ ọrụ 150 lita. na., mgbe kachasị dịlarị 178. Ịghọ ma tinye aka: nke kachasị - 730 N / m.
Enwere ike igosi ihe ndi a nile n'ime ndu ndu. N'ezie, engine nke a na - abanye na mma nke mgbakọ ahụ na ikike nke ike, ma na akụkụ D-260 na ihe ndị na - emepụta ya, ihe ndị nwere ike ịnweta, njigide, na nlekọta ntanetị nke ndị ọrụ.
Olu nke nnukwu mmanụ tank - 130 l, ndị ọzọ - 120.
Ị ma? A na-atụle tankị Lamborghini "ndị nketa" nke traktị. Tupu e mepụta ụgbọala ndị dị ike, onye nwe ụlọ ọrụ ahụ, bụ Feruchcho Lamborghini, hiwere ụlọ ọrụ maka mmepụta nke ugbo na akụkụ maka ya.
Nri zuru ezu zuru ezu ruo ogologo oge: uru nke ezigbo mmanụ ọkụ dị ka paspọtụ bụ 162 g / l.s.ch. Na ọnọdụ ndị dị adị, ebe ọtụtụ dabere na mgbanwe na usoro ọrụ, ọnụ ọgụgụ a nwere ike ịrị elu (ọ na-abụkarị karịa 10%). Ọ na-apụta na maka ngbanwe ahụ ọ ga-ekwe omume ime n'enweghị mmanu.
Ụlọ nke nwere cylindrical glazing na-enye ọnọdụ dị mma maka ọrụ nchekwa. Ọ na-ejide onwe ya n'osisi ma nwee mkpọtụ dị mma na mkpuchi mkpuchi (nke hapụrụ ihe ochie na "Belarus"). N'ihi obara nke iko ahụ, anyanwụ na-ekpuchi ma na-eche echiche ergonomics, ọ dị mfe ịrụ ọrụ.
Inweta nhazi njikwa anaghị achọrọ nkwadebe pụrụ iche: a na-ahụ ihe niile na ọkwọ ụgbọala, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, na-arụ ọrụ na njedebe, oche ahụ na-agbanwe ogo 180. Ogwe n'onwe ya na-apụta, ọnọdụ ya nwere ike idozi n'ọtụtụ ebe.
Ogwe ntụziaka ahụ nwere mgbapụta mpempe akwụkwọ, ọfụgharị ahụ adịghịkwa ekpuchi ngwaọrụ ndị na-achịkwa. A na-edozi ebe a na-enye ike iji nweta ọkụ ọkụ, yana sistem na njigide.
Ọ dị mkpa! A na-etinye ngwongwo nke oriọna oriọna ise n'elu ogwe ngwaọrụ.
E gosipụtara ọhụụ dị mma ọ bụghị naanị site na enyo enyo, kama na ndị na-ahụ maka windo n'ihu na n'azụ na "ndị na-ehichapụ".
Dị ka nhọrọ, enwere ike ịnweta igwe ikuku (a na-enye ọkụ ahụ dị ka ngwá ọrụ ndị a).
MTZ-1523 nwere ihe nkedo okpukpu abụọ. ụdị mechiri emechi. A na-eme ka atụmatụ ya dịkwuo mma ma kwadoro ya site na nchịkwa nke hydrostatic. Gearbox, dabere na nhazi ahụ, enwere 4 ma ọ bụ isii. Ihe na-ewu ewu bụ nhọrọ mbụ, na-arụ ọrụ na usoro 16 + 8 (16 ụzọ maka ịga n'ihu na 8 - maka ntụgharị). 6-ọsọ German gearbox brand ZF nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu: 24 + 12. N'eziokwu, a na-etinye ya maka ego.
Ike nke na-agbanye n'azụ bụ onwe, 2-ọsọ. Ezubere maka ngbanwe ụdịdị nke 540 ma ọ bụ 1000 rpm. N'ihu ihu igwe dị dịka nhọrọ. O nwere otu ọsọ ma "gbanwee" n'ime 1000 rev / min.
Ejiri usoro on-board maka voltage voltage nke 12 V na generator nke 1.15 ma ọ bụ 2 kW (ya niile dabere na nhazi nhazi). Mgbe mmalite, a na-arụ ọrụ na-enye 24 V (na 6 kW).
Batrị abụọ ejikọrọ na ya nwere ikike nke 120 Ah ọ bụla.
Ị ma? Kwa afọ (kemgbe 1998), Trattori Ịtali na-akwado asọmpi Tractor of the Year, nke na-achọpụta ụdị nke ụdị oge a bụ nke kachasị mma na nhazi na njiri.
Mgbe ọ dị mkpa iji jikọọ ndị na-azụ ahịa n'ụdị nkeji awara, a na-eji ogwe jikọtara maka 9 kọntaktị.
N'ime usoro nchịkwa hydrovolum e nwere nfuli abụọ: otu nke na-enye ike (nke nwere olu "16" cubes "na ntụgharị) na onye nkwụnye (na 160 cc / rev).
Ngalaba a na-ahụ maka ígwè ọrụ nwere ihe abụọ hydraulic cylinders na eriri mkpara.
N'ihe nlereanya a, ha na-ahụ 3-diski, na-arụ ọrụ n'ime bat mmanụ. Ha na-eme ma n'azụ na n'ihu wiil (site na axle drive) na ndị na-anọchite anya ndị na-ese onyinyo:
na-arụ ọrụ n'azụ ụkwụ;
ebe nchekwa dị ukwuu;
na-adọba ụgbọala n'azụ ụkwụ.
Ebe a na-adọba ụgbọala, ọ bụ breeki nwere njikwa ụgbọala. A na-ejikọ ụgbọ okporo ígwè na-adọkpụ ụgbọala na njikwa njikwa traktị.
A na-eme windelị ihu n'ihu nke ụdị osisi dị ka usoro coaxial na-eji igbe eletrik na mbara igwe mechiri emechi. Ntughari na - atụgharị abụọ.
Ọ dị mkpa! Mgbe ị na-agagharị n'okporo ụzọ awara, a na-atụ aro ka ị gbanyụọ windel mbanye n'ihu: nke a ga-eme ka nkedo nke taya n'ihu na akụkụ nke unit a kwụsị.
A na-achịkwa ya site na njigide esemokwu na òkè nke ngọngọ EGU. Edobere akwa ahụ maka ọnọdụ 3: na, na ọnọdụ nke mmechi emechi na ịrụ ọrụ nke ntinye aka (ọ bụrụ na agbanyere azụ azụ).
A na-ejikwa "mbara ụwa" na azụ azụ. Ihe nkedo ukwu nwere otu ọdịdị dị ka ọ dị na njide ihe n'ihu - otu ụzọ ejiji agbagharị na-ebute ntụgharị ahụ na gearbox ahụ site n'enyemaka nke anya abụọ n'akụkụ. Mkpuchi iche.
Chassis MTZ-1523 gụnyere:
Ọkara-etiti na-eguzosi ike nkwusio;
ubu n'ihu na azụ. Mgbe na-arị elu spacers n'ezie nweta twinning n'azụ ụkwụ.
Usoro hydraulic olu nke 35 lita kwadebere ya na mpempe mgbapụta. Nke a nwere ike ịbụ nhọọ aha D-3, UKF-3 ma ọ bụ NSh 32-3. Ha nile nwere otu ihe a:
arụ ọrụ olu nke 32 cu. cm;
arụpụta ihe bụ 55 l / min;
arụ ọrụ - ruo 20 MPa.
STS - iche iche-nke nwere obere ihe, ya na ihe Bosch nke nwere oke. Ezubere node nke 3 a iji rụọ ọrụ na ọnọdụ anọ. Ndị isi n'ime ngwaọrụ ya bụ:
spool regulator (electrohydraulics).
Njikọ ihu n'ihu (nhọrọ) mere n'ụdị cylinders, na n'azụ nwere ọdịdị nke eriri na 4 njikọ.
Ngwá ọrụ hydraulic nke azụ azụ (RLL) na ndị na-eji ụgbọ okporo ígwè BELARUS-1523 gụnyere tank tank (1) nke nwere ikike nke lita 35 na ntinye 20 micron (2) n'ime ya; mgbapụta mgbapụta (3) na ngwagharị switchable (4); (5), nke nwere mpaghara 3 nkesa (LS) 6 na njikwa ntuziaka, ogbugba (nchekwa) valve 7, elektrotrogidraelichvevy regulator (EHR) 8. abụọ cylinders nke RLL (9), hoses na hoses.
EHR na-achịkwa site na njikwa. 10 Ọnọdụ a na-achịkwa ihe ngosi sensọ nzaghachi: ọnọdụ (11), ike (12) na onye na-ahụ maka microprocessor 13. imejuputa algorithm ahụ a kapịrị ọnụ.
N'ebe a na-anọpụ iche nke ọkpụkpụ 14. nke onye nkesa 6 na EHR, mmanụ si na mgbapụta ahụ 3 na-agafe valvụ mmiri na-emeghe 7 n'ime tank mmanụ site na ntanye drain (2).
Mgbe ị na-etinye valvụ 14 nke onye nkesa na ọnọdụ ọrụ (ibuli elu, belata) mmanụ si na mgbapụta ahụ abanye na isi ọrụ nke ọrụ ugbo.
RLL (15) bụ onye na-achịkwa (EHR) (8) nke nwere ikikere nke electromagnetic, nke mejupụtara valvụ uzo (16). ebili elu (17) na akwa valve (18), nke a na-achịkwa electromagnets (19). Na njikwa akara aka nke RLL, dabere na usoro nchịkwa nke onye ọrụ ahụ na-achịkwa nchịkwa, usoro ahụ na-enye gị ohere ịnọgide na-arụ ọrụ a na-arụ ọrụ nke ọma, meziwanye nsụgharị traction, melite nsụgharị traction nke unit site na-ebufe akụkụ nke arụ ọrụ ahụ na wheel
Na nke a, akara eletriki nke onye na-ezipụ (2) nke ọnọdụ (11) na ihe mgbaàmà abụọ (12) batara onye na-ahụ maka microprocessor ma jiri ya tụnyere mgbaàmà nke onye ọrụ na panel ahụ (10) nyere.
Ọ bụrụ na amaokwu ndị a adabaghị, onye na - ahụ maka njikwa (13) na - arụ ọrụ nchịkwa maka otu n'ime ihe abụọ ahụ (19) nke EHR. nke, n'aka nke ya, site na mmiri eletrik hydraulic 9, na-emepụta ihe na-emezi emezi na-arụ ọrụ n'ubi ma ọ bụ ala, si otú ahụ na-eme ka ọnọdụ nke mmejuputa na mmegide ahụ dị ike.
Dịka nhọrọ ndị na-emepụta na-enye ụdị na usoro ndị a:
ZF gearbox (24 + 12);
ballast n'ihu nke ruru kilogram 1025;
otu ogwe maka wiil abụọ (ma n'azụ ma n'ihu);
oche ndị ọzọ;
Ị ma? Na June 25, 2006, e dekọrọ ndekọ nke traktị na-arụ ọrụ na otu ubi na ubi dị nso Britishbase Hallavington. Ndị na-ahazi gụnyere 2141 nke ngwaọrụ.
Site na mkpokọta, osisi n'onwe ya na-arụpụta ubi maka ịkọ ala dị iche iche.
Maka ndi nchikota nke ndi ozo, akwukwo ha buru ibu, ihe dika ihe nile nwere ike itinye aka na trakta - site na ulo oru ubi nke ndi mmadu na-akpochapu, site na onye oru ubi na mpaghara ugbo ala (abughi ihe ndi ozo.
Ahụmahụ nke ndị ọkwọ ụgbọ ala na ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè kpughere gosiri na MTZ-1523 na "ọrịa" ya. Ihe ndị a ghọtara na ụwa nke traktọ Minsk bụ:
ndị nwere ike ịdabere na nke dị ike;
mmanụ a na-anakwere na mmanụ;
ọnụnọ na nhazi nke ọnụọgụ dị iche iche dị elu;
ụlọ dị jụụ na-ekwe omume ịtụgharị aka na-arụ ọrụ na njikwa azụ;
ndakọrịta na ngwaọrụ ndị ọrụ ugbo;
na-arụ ọrụ na nnukwu ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ ndị a na-agbanye ma zoo;
N'ikpeazụ, ọnụahịa bara uru, nke, tinyere nnweta nke akụkụ ahụ dị iche iche na ihe dị elu na-eme ka ígwè ọrụ a dị mma maka onye ọrụ ugbo.
Ọ dị mkpa! Ka onye traktọ ọhụrụ ahụ rụọ ọrụ ruo ọtụtụ afọ, ruo TO-1 (125 awa), a na-eji ike engine rụọ ọrụ ruo 80% nke uru ya.
Ụgbọ traktọ a nwere ihe ndọda ya dị ka:
na-agbanye aka na-ejide aka (cylinder) (ma ọ bụghị mgbe nile ịchọta ihe nrụzi);
ihe mgbagwoju anya nke njigide njigide na njigide nkpu;
mmanụ na-esi na engine apụta (mgbe anaghị ejide gaskets);
mmiri na-adịghị ike nke na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ mmiri;
Mmetụta mmekọrịta nke anyị na ọnọdụ anyị bụ nhazi nke nsụgharị na engines Deutz - ha na-arụ ọrụ nke ọma, ma n'ọnọdụ nke oke ngbanwe nke akụkụ dị iche iche na-akpata ụgwọ dị oke mkpa.
N'ịkọba uru na nkwekọrịta niile, ọ dị mfe ịmara na MTZ-1523 dị ezigbo mma site n'ụkpụrụ ụlọ, igwe na igwe igwe nwere ọtụtụ uru na atụmatụ dị mma. Ma mgbe ụfọdụ, traktọ nwere ike ime ka nsogbu bịa na nzukọ ezughị okè.
Ugbu a, ị maara ihe traktọ a nwere ike, na n'ozuzu okwu i nwere ike iche n'echiche ya. Olileanya, data ndị a ga - enyere aka ịhọrọ oke ngwá ọrụ ugbo, ma zụọ "Belarus" ga - abụ onye inyeaka a pụrụ ịtụkwasị obi. Mpempe akwụkwọ na nkwụsịtụ dị n'ọhịa!
Gwa ya na ekwentị banyere 1523. Ọ nwere afọ 4. Ọ na - ekwu n'ụzọ siri ike ihe ndị a: - engine, hydraulics, chassis - ihe nile na - arụ ọrụ nke ọma. Ebe na-adịghị ike a na-akpọ ogwe aka, nke ọ kwụsịrị mgbe afọ atọ gasịrị. Kedu ụdị uwe m na-aghọtaghị n'ihi enweghị ike ịgụ akwụkwọ. O yiri ka ọ dị 1221 kwa.
Papa m nwetara MTZ 1523 ọhụrụ ma rụọ ọrụ na ya ruo afọ atọ. Ọkpụkpụ ahụ malitere ozugbo. E nwere nsogbu mgbe niile na gearbox (nkedo na igbe ahụ na-agbọ agbọ na mmanụ 50 lita sụgharịrị na sekọnd), mgbe ọnwa 7 gasịrị, piston na mkpanaka jikọtara. Ọfọn, mgbe e mesịrị, e nwere naanị nsogbu ndị ọzọ na-arụ ọrụ nke na-akụpu isi na isi nke ụbụrụ na mgbe niile maka afọ 2 gara aga na ha emeghị ihe ọ bụla na injin ahụ ma gwuo isi, dochie ya, wdg ... M na-agbachi nkịtị banyere obere ihe. Robe kụrụ afọ atọ kwa afọ - niile gwuchara. ИЗ партий в 10 штук МТЗ 1523 проблемы были у всех тракторов. Основные проблемы - это двигатель и коробка передач.Ọ bụ ezie na m ga-ahụ uru nke ihe nlereanya a - ụlọ dị jụụ ma dị jụụ (onye na-arụ ọrụ na Belarusians na obere ụlọ), nchịkwa dị mfe (ị nwere ike ijide mkpịsị aka). Ọfọn, banyere nkwekọrịta, ana m adị jụụ. Ugbu a, traktọ kwesịrị ya. Ha na-eche ka a na-agbanye ígwè ọhụrụ ahụ.
Otu esi akụ na-eto strawberries (ubi strawberries) iche "Wima Zanta"
Alokaziya: esi elezi anya n'ulo